Maitiro ekugadzirisa iyo Apple Watch Control Center | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa iyo Apple Watch Control Center
Iva ne mudziyo mutsva inyika yose, kunyanya kana usati wambowana mukana weiyo yakafanana nayo. Iyo yekutanga iPhone, yekutanga Mac, iyo yekutanga iPad, uyezve yekutanga Apple Watch. Kana iwe uine Apple smartwatch mumaoko ako, iwe uri muhombe sevatsoropodzi vanoiisa seimwe yemawadhi akanakisa emawoko pamusika nhasi.
Iyo wachi inoshandisa iyo yekushandisa system tarisiro 5, iyo inowirirana zvakanyanya neIOS pane iyo iPhone, sezvo pasina iyo yaisazokwanisa kushanda nemazvo. Muchikamu chino tichaenda kukudzidzisa gadzirisa iyo Apple Watch Control Center, icho chinhu chinoonekwa pachiratidziro kana iwe uchitsvedza kubva pasi kusvika kumusoro.
Mabhii maviri akapusa uye iwe wave kutogadzirisa iyo Center Center
Iyo Control Center inzvimbo yatinayo kukurumidza kuwana kune rumwe ruzivo uye zviito nekukurumidza kubva kuApple Watch yedu. Kana iwe uine chimwe chigadzirwa cheApple uchaona kuti iyo iOS Control Center yakafanana zvikuru maererano nemabasa ayo. Kuti ukwanise kuishandisa zvizere uye nekuita mabasa nekukurumidza, iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuzvigadzirisa kuve nemabasa iwe aunonyanya kushandisa kumusoro.
Zviri nyore kwazvo uye zvinotevera ma mechanics ekubvisa uye kugadzirisa iOS maapplication:
Vhura iyo Control Center nekutsvaira kubva pasi kumusoro.
Rova pasi pasi nemunwe wako kana Dhijitari Korona kusvikira iwe waona bhatani rinoti "Hora".
Paunenge wawanikwa, pinda pinda. Iwo mabhatani anozoita grey.
Kuti uchinje chinzvimbo chebhatani, chete ibatisise kusvikira yachena uye pasina kusunungura uchafanirwa kuiisa munzvimbo nyowani.
Paunopedza kugadzirisa yako Control Center, ingoiburitsa nekutsikirira paDhijitari Korona.
Nenzira iyi, iwe unogona kuwana nyore zviito zvekukurumidza zvaunoshandisa zvakanyanya. Nekudaro, kana iwe uchinge wasvika iyo Yekudzora Center, unogona kuvashandisa pane kutsikisa pasi kuti uwane chiito iwe chauri kutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa iyo Apple Watch Control Center
Dzivirira yako iPhone neaya maOtterBox kesi
LifeProof inopa bhatiri rekunze risingapindirani nemvura uye guruva iyo yatinogona kuchaja chero chishandiso